Bombardier CRJ-200 Full Pack - wax fayl ah ama faylal ah oo loogu talagalay Hawlaha Shaqada ee VC
Bombardier CRJ-200 Full Pack - wax fayl ah ama faylal ah oo loogu talagalay Hawlaha Shaqada ee VC 1 sano 5 bilood ka hor #1344
In ka badan maalmoodyadii 2 ee ugu dambeeyay waxaan soo degsaday labadaba nooc (oo aan lahayn rakibaal) oo ah Baadhitaanka Bombardier CRJ-200 Xirmooyin FSX iyo P3D xirmo.
Waxaan akhriyay guddi-hawleedka "Virtual Boxing Virtual Panel", laakiin ma heli karo faylasha 'model.mod' ama 'panel.mod' ee ku xusan buugga.
Ka dib markii la rakibo, waxay u muuqataa in qaar ka mid ah shaqeynta kaliya lagu rakibay VC. Miyaa feyliyadan (iyo kuwa kale ee loo baahan yahay xirmada David Hoeffgen) oo laga heli karaa meel Rikoooo ah?
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.155